Git Sangit News » छोराको गर्भ बोकेर आमाले जन्माइन् बच्चा ! (भिडियो हेर्नुस्)
छोराको गर्भ बोकेर आमाले जन्माइन् बच्चा ! (भिडियो हेर्नुस्)
समाजमा आजभोली निकै घृणीत र कल्पना पनि गर्न नसकिने काम हुन थालेका छन् । यस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा पछिल्लो पुस्तालाई पक्कै पनि नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
सुर्खेतमा आमाछोराबीच सम्पर्क भएर आमाले बच्चा जन्माएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो घटनामा संलग्न दुवै जना अहिले भिडियोमा सार्वजनिक भएर त्यसबारे बताएका छन् । आफ्नै जेठाजुको छोरासंगको सम्पर्क पछि उनी अहिले सुत्केरी भएकी छन् । उनले छोरालाई जन्म दिएकी छन् ।महिलाका श्रीमान विदेशमा छन् । दुई वर्ष देखि श्रीमान विदेशमा रहेकी महिला घरमा सुत्केरी भएपछि बच्चाको बुवा को हो भन्ने खोजी हुँदा उनी आफ्नै छोराको गर्भ बोकेको खुलेको हो । उनले गत मंसिरमा छोरासंग सम्पर्क भएको स्वीकार गरेकी छन् । छोराले आफुसंग ४ पटक सम्पर्क राखेको आमाले स्वीकार गरेकी छन् ।
यस अघि यि महिलाको बहिनीले पनि युवकको बुवालाई पनि त्यस्तै आरोप लगाएर ४० हजार रुपैया तिराएको बताएकी छन् । युवकले भने बुवालाई पैसा तिराएको कारण रिसिइबी भएकाले आफुलाई पनि आन्टीले त्यस्तो आरोप लगाएको युवकले बताएका छन् । ति युवक भन्छन्, म यस्तो कुरामा आन्टीसंग कसरी सहमतिमा आउन सक्छु । उहाँ आमा समानको मानछेसंग त्यस्तो काम गरेकै छैन ।
प्रकाशित मिति १५ भाद्र २०७७, सोमबार १४:१९